Yeyiphi impawu ekufuneka ilaptop yokudlala elungileyo ibenayo | Iindaba zeGajethi
Ukuthenga ilaptop ayisiyonto ilula, kuba kufuneka sithathele ingqalelo izinto ezininzi. Eyona nto inzima nangakumbi kukuba sifuna ukuthenga ilaptop yokudlala elungileyo. Iilaptops zemidlalo ziye zaba zezona zidumileyo kwimarike. Ibango layo liyaqhubeka nokunyuka kwaye akubonakali ngathi liza kuma nangaliphi na ixesha kungekudala. Unokuba nomdla wokuthenga enye.
Kule meko, Kukho inani leempawu ekufuneka ilaptop yokudlala efanelekileyo ibenayo. Ukuze sazi ukuba sithenga isixhobo esisemgangathweni kwaye siyakusinika intsebenzo esiyilindeleyo kuyo. Yintoni ekufuneka siyithathele ingqalelo?
Okulandelayo siza kukushiya nemiba ephambili ekufuneka siyithathele ingqalelo o ezona mpawu ziphambili ekufuneka uhlangane nazo kwilaptop yokudlala ngoku. Sisikhokelo ngokubanzi esiya kusebenza njengokuqhelaniswa xa uthenga enye.
Le yinto ebalulekileyo xa uthenga ilaptop yokudlala imidlalo. Kuba ukudlala kusebenzisa izixhobo ezininzi kwaye kufuna ngakumbi kwikhompyuter. Ke ngoko, isixhobo sethu kufuneka sibe nakho ukuphendula kweli bango kwaye silithobele ngalo lonke ixesha. Ngokukodwa, ukuba ngemidlalo yangoku sinokubona ukuba ineengxaki, luphawu lokuba ayizukudlala ngemidlalo efikayo kwixesha elizayo.
Ke ngoko, kufuneka siqiniseke ukuba ineprosesa esemgangathweni kwaye inentsebenzo ekhethekileyo. Ke kufuneka sijonge okona kulungileyo kwintengiso. Ngale ndlela, sinokubheja kwi-Intel Core i5 okanye i7, awona manqanaba aphezulu omenzi. Iimodeli ezinje nge-AMD A10 lukhetho olunokuqwalaselwa.
Ngaphandle kweprosesa, sidinga ikhadi lemizobo elilungileyo. Le yeyona nto ichazayo kwilaptop yokudlala. Ke ngoko, kufuneka sinikele ingqalelo kulo mbandela. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba inemizobo evela kwi-NVIDIA okanye i-AMD, eyokuqala iyeyona ixhaphake kakhulu kwintengiso. Sineemodeli ezininzi ezikhoyo malunga noku.
Ukuba ubheja kwimodeli eneNVIDIA, Ngaphakathi kosapho lwe-G-Force akufuneki uye ezantsi kwiimodeli ezinje ngeGT650M. Ngelixa kwimeko ye-AMD, usapho lwama-7000 lolunye lwezona zikhetho zibalaseleyo koku. Zisebenza kakuhle ngawo onke amaxesha.
Kwakhona i-RAM ibalulekile kule meko, kuba sifuna i-RAM eninzi. Ubuncinci buya kuba yi-4 GB, nangona kunjalo inyani kukuba efanelekileyo kwaye iphantse isisiseko kule ndlela yi-8 GB, ukuba ichaze i-8GB DDR4. Ukuba kukho imodeli ene-16 GB DDR3 ikwayinto elungileyo, nangona kunokwenzeka ukuba ixabiso layo liphezulu kakhulu.
Ukuthatha ingqalelo ukuba siza kudlala, sifuna ubungakanani bescreen ukuze siwanele lo msebenzi. Ukongeza ekubeni nesisombululo esona silungileyo malunga noku. Kungenxa yokuba asifuni ukuba isikrini sibe nomgangatho ombi okanye unyango olubi ngemibala. Oku kubangela ukuba amava omsebenzisi ayisiyiyo eyona ilungileyo xa kufikwa kumba wokudlala.
Ngokumalunga nobungakanani, kuxhomekeke kancinane kukhetho lomntu, nangona i-intshi eziyi-15,6 inokuba bubungakanani obuqhelekileyo esinokukhetha. Ubungakanani obulungileyo kwaye busivumela ukuba sonwabele imidlalo ngaphandle kweengxaki. Nangona ukuba unokukhetha, Iscreen se-intshi eyi-17 sinokukunika umdlalo ongaphezulu. Nangona kusenokwenzeka ukuba kubiza kakhulu, nto leyo esisithintelo kwabaninzi.
Ukuba sigxila kwisisombululo sescreen, Ngokufanelekileyo, kufanele ukuba ibe nesisombululo esipheleleyo se-HD (1920 x 1080 pixels). Kodwa ukuba sifumana imodeli esiyithandayo ngomgangatho ophezulu, ihlala yamkelekile. Umgangatho osezantsi njenge-HD kunokwenzeka, kodwa unokukunika umda kwimidlalo ethile. Kodwa kunokuba yinto enokuqwalaselwa.
Zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe ngokubhekisele kwitekhnoloji yescreen. Sifumana izikrini ze-LCD, i-IPS okanye i-LED namhlanje. Kuya kufuneka sikhethe eyona ilungele thina kunye neyona ilunge kakhulu emehlweni ethu. Ukongeza, kukho iimodeli ezinezikrini ezichasayo okanye itekhnoloji enceda amehlo adinwe kancinci. Ukuba kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho, kunokuba umdla ukubheja kubo kwi-laptop yakho yokudlala.
Kule meko, sizifumana sinokuthandabuza okufanayo okusirhwebayo xa sithenga ilaptop eqhelekileyo. Ngaba unako ukubheja kwidiski enzima yemveli (HDD) okanye ukubheja kwi-SSD. Umahluko kukuba i-SSD iya kusinika ukusebenza ngokukhawuleza nangokukhaphukhaphu, nangona zihlala zinomthamo omncinci wokugcina. Into esele ishiyekile i-hard disk.
Ukhetho luxhomekeke kancinci kukhetho lomntu. Unga khetha ilaptop yokudlala enenkqubo exubeneyo, edibanisa zombini i-HDD kunye ne-SSD, ke ngoko ufumana okona kulungileyo kwihlabathi liphela. Nangona amaxabiso abo ahlala ephezulu kakhulu kwiimeko ezininzi.
Ukuba ubheja kwimodeli enediski enye, eyona ilungileyo iya kuba yimeko eqinileyo (SSD). Ngokukodwa kuba zikhawuleza kakhulu, zilula kwaye aziqhekezi. Nangona sinomda wokuba umthamo wokugcina ungaphantsi. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba kukho i-250 GB, enokuba ilungile. Ukuba sifumana imodeli ene-500 GB iya kuba ilungile.
Njengokuqiqa, sinomdla kwibhetri esinika ukuzimela, kuba asifuni ukuba sihlawulise ilaptop ngazo zonke iiyure okanye sidlale kuphela kwilaptop edityaniswe namandla. Xa sijonga ukuzimela kufuneka sihlale sifunda oko kuboniswa ngumenzi. Kungenxa yokuba lulwazi olusinceda ukuba sifumane umbono malunga nexesha lalo.
Kodwa, Kuhlala kulungile ukuba sifunde uluvo lwabasebenzisi esele bethenge ilaptop. Kuba basinika ukuzimela kwelaptop yokwenyani, emva kokuqhelekileyo kunye nokusetyenziswa rhoqo. Ke sinokwazi ukuba yeyiphi na esinika inkululeko enkulu kwaye iyayifanela into esiyifunayo okanye esiyifunayo.
Ingcebiso malunga noku kukuba Makhe sijonge ilaptop enokuzimela kwayo ingehli ngaphantsi kweeyure ezintandathu. Ukongeza, kuya kufuneka sithathele ingqalelo ukuba kunokwenzeka ukuba emva kwexesha lokusetyenziswa, ibhetri ilahlekelwa sisiqingatha somthamo wayo. Ke ngoko, ibhetri enkulu kakhulu ilunge ngakumbi kuthi.
Kwilaptop yokudlala, umgangatho wesandi ubalulekile, kuba inendima yokumisela xa kufikwa kumba wokudlala kunye namava ngokubanzi. Nangona kunjalo, inkcukacha ebalulekileyo malunga noku kukuba isandi silungile kuzo zombini izithethi naxa sisebenzisa ii-headphone. Kungenzeka ukuba umsebenzisi uza kunxiba iseti yentloko ngombhobho.
Kuya kufuneka siqiniseke ukuba basinika umgangatho ophezulu wokumamela kwaye sinokuva zonke iinkcukacha kunye neziphumo ezikumdlalo ngokugqibeleleyo. Inxulumene noku, Kufuneka sijonge kwikhadi lesandi elikwilaptop umbuzo xa kuthengwa.
Ikhadi lesandi se-HD esingqongileyo yeyona ndlela ilungileyo, njengoko isiqinisekisa ngomgangatho ophezulu wesandi ngawo onke amaxesha. Ke kufuneka siqwalasele oku. Nangona uninzi lweelaptops zemidlalo zihlala zinayo enye efakiweyo. Kodwa ukuqiniseka, kulungile ukuba siyijonge, ngaphambi kokuba ihambe kakhulu.
Izitshixo zoku ilaptop yokudlala kufuneka zibe nkulu kwaye sivumele ukuba sichwetheze kamnandi ngamaxesha onke. Ukongeza, kufuneka zichazwe kakuhle kwaye aziniki ngxaki xa zicinezelwa. Kuba oku kuhlala kusisiphako esiqhelekileyo esibangela ukucaphuka okukhulu phakathi kwabasebenzisi. Ke kufuneka sikuphephe ukuwela kule mpazamo xa uthenga enye.
Njengoko kusengqiqweni, ukukhanya nakho kudlala indima ebalulekileyo kwikhibhodi yolu hlobo lwencwadana yokubhala. Ngokufanelekileyo, ikhibhodi kufuneka ibuyiselwe umva, kuba kunokwenzeka ukuba uyisebenzise ebumnyameni ngamanye amaxesha. Ke, uyilungele le meko. Inani lemibala yinkcukacha eyongezelelweyo, engabalulekanga kangako. Ubuncinci kukuba ukukhanya, okunye kuza kamva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » Iimpawu ezenzelwe ukuba ilaptop efanelekileyo yokudlala ibe nayo ngo-2018